Laza Adina Malagasy No 14 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar ~ Sujets et corrigés du BAC 2020
Laza Adina Malagasy No 14 | Révision Baccalauréat 2018 à Madagascar
1. Milaza sokajin’olona ialan-tsiny rehefa hikabary na handray fitenenana.
2. Milaza ohabolana na oha-pitenenana telo (03) mikasika ny Tody.
- Marina kanjo ny anao! Tena mampalahelo isika tanora ankehitriny. Mba nianatra ihany. Mba nandanian’ireo ray aman-drenintsika fatotra amam-pondrana ihany, … nefa dia izao: tsy an’asa.
Fahiny, rehefa miteny I dada mialohan’ny taom-pianarana vaovao dia hoe: “Mianara tsara! Tsy manan-kolovana afa-tsy ny fahaizana ianareo. Mianara dia ho tafita!” Ankehitriny anefa, toa izay nianatra indray no rendrika (…)